VIDEO+SAWIRO:-Alshabaab oo Baahisay Farriin uu soo diray Askari Maxbuus ah oo u dhashay Dalka Uganda. | Voice Of Somalia
VIDEO+SAWIRO:-Alshabaab oo Baahisay Farriin uu soo diray Askari Maxbuus ah oo u dhashay Dalka Uganda.
Posted on September 27, 2016 by Voice Of Somalia Image
Xarakada Alshabaab ayaa markii ugu horreysay baahisay Video oo uu kasoo muuqanayo Askari Maxbuus ah oo u dhashay dalka Uganda, kaas oo Sannad ka hor lagu qabtay dagaalkii cuslaa ee ka dhacay deegaanka Jannaale ee gobolka Shabeellaha hoose.
Askarigan oo lagu magacaabo Masassa M.Y waxa uu Ciidamada Meliteriga ee dalka Uganda kusoo biiray Sannadkii 2009kii, isagoona ka mid ahaa cutubyo ka tirsan Ciidamada Amisom oo Sannado ka hor lagu soo daabulay dalka Soomaaliya.
Masassa M.Y waxa uu farriintiisa kula hadlay Hogaamiyaha dalka Uganda Yuweri Musaveni, waxa uu sidoo kale la hadlay Shacabka dalkiisa, isagoona codsaday in laga shaqeeyo sidii lagu sii deyn ah oo uu xorriyadiisa u heli lahaa.
Dagaalkii cuslaa ee Sannad ka hor deegaanka Jannaale ee gobolka Shabeellaha hoose ayaa waxaa lagu dilay inkabadan 50 Askari oo u dhashay dalka Uganda, waxaa sidoo kale dagaalkaas lagu qabtay Askar Maxaabiis ah, kuwaas oo illaa iyo hadda tiradooda aysan si rasmi ah u sheegin Xarakada Alshabaab.
Sarkaal NISA ka tirsan oo shaaciyey siyaasiyiin Soomaali ah oo la shaqeeya war-doon ajnabi ah
GABAY:-Xamar Gaalo Waa Laga Xoreyn